Hot akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe Manufacturers - China Hot akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe Factory, Suppliers
410 ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe nwere ezigbo corrosion eguzogide na machinability. Ọ ga-esi ike mgbe ọgwụgwọ ọgwụgwọ. A na-ejikarị ya arụ ọrụ agụba na valvụ. 410 igwe anaghị agba nchara nwere ezigbo corrosion eguzogide na machining arụmọrụ. Ọ bụ a zuru ezu nzube ígwè na ịcha ngwá ọrụ ígwè. 410S bụ a ígwè ọkwa na mma corrosion eguzogide na formability nke 410 ígwè.
Igwe anaghị agba nchara 321 bụ igwe dị ike, nke na - eguzogide oke okpomọkụ karịa 316L. Ọ nwere nguzogide nsị ka mma na acid acid n'ọtụtụ iche na okpomọkụ dị iche iche, karịsịa na mgbasa ozi oxidizing. A na-ejikarị igwe anaghị edozi 321 rụọ ọrụ nke duct, ihe na-eguzogide acid na akụrụngwa na-eguzogide ọgwụ.